Carl Bild oo ka faallooday geerida madaxweyne Hugo Chávez - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Carl Bild oo ka faallooday geerida madaxweyne Hugo Chávez
La daabacay onsdag 6 mars 2013 kl 08.38
Madaxda caalamka ayaa siyaabo kala duwan uga war-bixiyey geerida ku timid madax-weynihii dalka Venezuela Hugo Chávez oo xalay geeriyooday.
Madax badan ee waddammada dhaca koonfurta Ameerika ayaa sheegey iney tahay maalin murugo leh, halka uu madax-weeynaha mareeykanka Barack Obama sheegay inuu rajeeynayo xiriir wada-shaqeeyn ee ka wanaagsan oo uu dalkiisu la yeesho Venezuela mustaqbalka.
Wasiirka arrimmaha dibadda ee dalka Iswiidhen Carl Bildt (M), ayaa faallo uu ka qoray geerida Hugo Chávez ku sheegay inay tahay mid aan muran ka taagnayn inuu Chávez ahaa hogaamiye ay u sahlanayd sidii uu shacabka ku soo jiidan lahaa (karismatisk), hase yeeshee ay siyaasaddii uu dalka ku dhaqayay mararka qaarkood u weecisay dhabbo aan wanaagsanayn oo sabab u noqotay xaalad dhaqaale ee cakiran ee dalkaasi la soo gudboonaata. Iyo in dalka Venezuela iminka ay hor-taalo siduu ku dooran lahaa hoggaan dimoqoraadi ah, sida uu qoray Carl Bildt.
Muddo soddon maalmood gudahood ayaa lagu soo magacaabi doonaa ciddii la wareegi lahayd hoggaanka kursiga uu baneeyay Hugo Chávez.